Sresky - 1 ugu sarreeya soo saaraha xalalka iftiinka qorraxda ee 17 sano
Iftiinka Qorraxda ee SRESKY
Qorraxda casriga ah waxay wanaajisaa mustaqbalka, ka dhig adduunka mid iftiimaya
Technology ugu dambeeyey
Sresky waxay siisaa nidaamka xakamaynta caqliga ee App ee dhammaan nalalka dariiqyada qorraxda, aan si wadajir ah ula kulanno isbeddelka cusub
16 sano oo waayo-aragnimo R&D ah...
Shenzhen Sresky Industry Company waxaa la aasaasay 2004 waxayna siisay shirkad heer dawladeed oo heer sare ah!
SRESKY waxa uu helay shahaado heer qaran ah oo shahaado ganacsi oo heer sare ah toban sano oo xidhiidh ah. Waxay leedahay in ka badan 800 oo shahaadooyin oo ay ku jiraan ISO9001, ISO14000, ISO45001, iyo in ka badan 60 shatiyo.
SRESKY waxay leedahay aag warshadeed oo ka badan 30,000 mitir oo laba jibbaaran iyo in ka badan 300 oo shaqaale farsamo ah, oo ay ku jiraan in ka badan 50 injineerro R&D ah. Read more ...
Wax kasta oo aad rabto waa halkan
Iftiinka Solar Street
Iftiinka Beerta Cadceedda
Hal-abuurnimada joogtada ah ee tignoolajiyada casriga ah
* Gudaha Sresky alaab kasta waxaa si madaxbanaan u horumariyay, naqshadeeyay oo ay soo saartay Sresky oo leh patent, hadday tahay nakhshad ama teknolojiyad, waxaan sii wadeynaa hal-abuurnimada iyo jabinta sannad kasta!
* 3 teknoolojiyad cusub oo ALS, TCS, FAS ah oo macaamiisha siinaya qol badan oo qiimo jaban iyo faa'iido !
Weydiin loo diray
Macaamiisha & Sheekooyinka
Daawo Wax Badan Sheekooyinkeena
"Kumanaan Mashaariic ah oo ku jira 200+ magaalo iyo dalal"
Ku haboon Aagga Baarkinka Banaanka ee Kala duwan.
Xalalka iftiinka dariiqyada ee jid-waynta, jidka lugaynta iwm.
Darbiga, Talaabooyinka, cawska, sariiradda albaabka, deyrka iwm.
Xeebta, badda, xeebta, Lakeside iwm.
Goobaha dalxiiska ee dadweynaha & tuulooyinka fogfog.
Miinooyinka & Saxaraha
Ku Haboon Aagga Macdanta Boodhka & Kulul iyo Saxaraha.
Aad baad ugu mahadsantahay kalsoonidaada, waxaanan ku faraxsanahay inaan helno fariintaada.